Uebfaqja Abuuritaanka-ka WordPress për të parë më shumë se sa më shumë Lego.
Në këtë postim, ju do të gjeni më shumë FTP (Protokolli i Transferimit të Fajllave), duke u mbështetur në WordPress.
0.3 2. FTP lacag la’an ah
Isticmaalka Macaamiisha FTP është në mes të pjesës më të madhe mowduucyada yaryar ee la yaqaan ee horumarinta webka casriga ah, gaar ahaan bulshada WordPress. Tani waxay badanaa sababtoo ah nidaamyada maareynta maadooyinka waxay si aad ah u fududeeyeen habka dhismaha.
Waqtigii hore, horumariyayaashu waxay ubaahanayeen macaamil FTP ah si ay u faylaliyaan faylasha shabakadahooda shabakadooda waxayna ka dhigi karaan inay isticmaalaan dadka isticmaala – inay ka helaan hantida.
Maanta, dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso waa gundhig u Sameynta jaangooyada WordPress, soo qaado mawduuc, ooadad abuurto nuxur adigoo adeegsanaya interface muuqaal ah. Waxa kale oo ay fududahay in lagu daro farsamooyinka iyo sii wado boggaaga adoo ka ca plugins plugin, ka oo si toos ah loogu rakibay bakhaarka rasmiga ah ee WordPress.
Iyadoo a lahayn ado, hoo ku juala macaamiisha sare ee FTP waa inaad tixgelisaa boggaaga WordPress:
Faqerojtësit Jiid-iyo-Jooji – Xayaysiinta waa muuqaal heer sare ah oo u sahli kara horumarinta inay diyaariyaan xisaabtooda FTP. Iyada oo CyberDuck ah, muuqaalka buuggu wuxuu isticmaalaa jiidis iyo kala-dhex-dhexaad ah – si sahlan loo isticmaalo heerarka cusub.
Cryptomator – Shtypni numrat e fundit të CyberDuck-it në SFTP (Sigjet i Sigurt i Transferimit të Dosjeve të SSH). Falas shkarkuar Pamje Eksitim FTP, waxaad waliad sugi kartaa xogtaada Aplikacioni Cryptomator, ju lutem, ju lutem, ju lutem vizitoni abourto waraaqo codsi ah oo ku saabsan server kasta oo kasta ama hannaanka kaydinta dariga.
2. FTP lacag la’an ah
Aqalka Bar – FTP bilaash ah ayaa ku yimaada barta xaalad-dhab ah oo bandhigaysa hannaan joogto ah iyo sidoo kale macluumaadka ku saabsan faylka hadda la doortay. Tani waxay kaa horjoogsataa inaad wax ka beddesho, tirtirto, ama aad u guurto faylal badan oo shil ah.
Dhamaynta Xeerka – Waxaa muhiim ah in la ogaado në tifaftiraha dhismaha ee nuqulkii lacagta la bixiyay uu ku yimid muuqaal gaar ah oo dhameystiran. Kaliya taasi ma badbaadin doonto waqti, laakiin waxay sidoo kale ka hortagi doontaa qaladaadka qalab ee keeni kara madax-xoqid la’aan.
Arkivi ZIP Samee – Haddii aad u baahato inaad bogto boggaaga, waxaad ka faa’iideysan kartaa faylka hal-fure "FTP falas" si uu u abuuro nuqullo ZIP ah oo loo diro wadooyinka maxalliga ah. Tani waxay hubineysaa inaad si dhakhso ah uga soo kaban kartid qaladaadka iyo faylasha khalkhalka leh.
Xaddidaadda Xawaaraha Khaaska ah – Haddii aad ka walwalsan tahay wareejinta FTP ee ku mashquulsan dhammaan xawaaraha internet-ka, waxaad dejin kartaa xaddidaadaha xawaareynta ee ka dhex socota bogga dejimaha FileZilla. Si fudud u tag ‘edito’> “Settings”> ‘Beddelka’ oo calaamadi "U oggolow xaddidaadaha xawaaraha".
Shfletuesi-Ku Saleysan – Adiga oo ah fidiye dheeraad ah, waxaad bilaabi kartaa isticmaalka Firaaqada Firfircoonida dhexdeeda. Falas shkarkuar Pamje Eksitim isha-tooska tooska ah ee maktabadda fidinta dheeraadka ah ee Firefox-ka, waana fiican tahay inaad tagto.
Filtrat Raadinta Fudud iyo – Ndërfaqe FireFTP waxaa ka mid ah baaritaan isku mid ah iyo fiilo filter kaas oo ku Sameeya laybereeriyada gudaha iyo kan fogba isla markiiba. Waxay taageertaa xaddiga raadinta ee horumarsan sida calaamad bannaan (–) loogu talagalay ka-reebista faylka, calaamaddaha dheeraadka ah (+) alaabta loo baahan yahay, iyo qiimaha ("") raadinta kalmado badan.
Faylka Xiriirka – Haddii aad isticmaasho qaab isku mid ah oo loogu talagalay lataliyeyaasha deegaankaaga iyo kuwa mjegull, ka dibna isticmaalaya qaabka isku xirnaanta ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo maro labada gooboodba hal mar.
Ikona me porosi – Tani waxay noqon kartaa mes muuqaal ah, laakiin gudbin larg ayaa kuu oggolaaneysa inaad isticmaasho sawirro gaar ah oo loogu talagalay "kuwa ugu cadcad".
Sida bilawga addeunka ee macaamiisha FTP, ka bibla FireFTP iyo CyberDuck ayaa ah ku ka ug murugsan fursadaha ugu wanaagsan. Ma aha oo kaliya inay fududahay in la isticmaalo, waxay wali bixiyaan sifooyin gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala bilaashka ah. FTP lacag la’aan ah sidoo kale waa doorasho fiican oo bilawga ah, laakiin kaliya haddii aadan daneynin wax kale oo aan ahayn marka aad galiso server-kaaga FTP.
Farsamayaasha webka ee khibradaha leh, dhinaca kale, waxay heli kartaa FileZilla oo waxtar leh madaama ay taageereyso mashiinnada badan. Ug dambeyntiina, mulkiilayaasha bogagga o hore u haystay gigabytes ee xogta online, ka bibna gudbin 4 waxay ku siinaysaa bangiga ugu fiican ee buck.